Ciidamada Itoobiya Oo Kufsi iyo Tacdiibin Ku Dilay Haweenay Soomaali Ah .
Saturday May 12, 2018 - 12:27:11 in Wararka by Super Admin
Maleeshiyaadka Liyuu Booliska loo yaqaan ee Xabashida Itoobiya ayaa sare uqaaday xasuuqa ay ugeysanayaan shacabka ku dhaqan dhulka Soomaaligalbeed.
Wararka ka imaanaya Soomaaligalbeed ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiya ay haweenay muslimad ah ku dileen magaalada gummeysiga kujirta ee Qabri Daharre.
Maleeshiyaadka Liyuu Booliska ayaa dilay haweenay lagu magacaabi jiray Taysiir Food Cumar Maxamed Salal , dilka ayaa waxaa warbaahinta ugu xaqiijiyey walaalkeed oo lagu Magacaabo Cabdi Rashiid Cali wuxuuna sheegay in Walaashiis ay Ciidamada liyuu Booliska ay Dhuunta ka ceejiyeen,sidaasna ay ku geeriyootay.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada Liyuu Booliska ay kufsadeen haweenayda ka hor inta aysan dilin, dhinaca kalane gabood fallo daran ayaa lagasoo sheegayaa xabsiga lagu magacaabo Jeel Ogaadeen oo kuyaal magaalada Jigjiga.
ciidamo Ashahaadda ladirir Itoobiyaan ah ayaa falal tacdiibin ah ugeysanaya maxaabiista ku xiran Xabsiga oo ku eedeysan in ay taageereen dagaallada lagula jiro itoobiya ee ka socda dhulka Soomaaligalbeed.
Haweenay kasoo badbaaday xasuuqa xabsiga ka socda warbaahinta u sheegtay in maxaabiis ka badan 15 qof ay u dhinteen tacdiibin uga imaanaysay ciidamada maamulka Cabdi ileey, maleeshiyada Liyuu Booliska ayaa caan ku ah xasuuqa shacabka muslimiinta ee ku dhaqan dhulka Soomaaligalbeed waxayna ku lug lahaadeen falal dambiyeedyo aad ufool xun.